Sucuudigu: Ma Nacabka Soomaalidaa Mise Waa Nasteex ?
Sucuudigu: Ma Nacabka Soomaalidaa Mise Waa Nasteex?
Qore: C/raxmaan.M Muuse ( gurmad)
Waxa warbaahintu tabisay todbaadkii hore,shir lagu magaacabay dib u heshiinta Soomaalida oo qalinka lagu duugay magaalada jidda ee dalka Sucuudiga .
Waxaana muraayadaha idaacadaha la iska arko laga soo daayay, boqorkii Sucuudiga iyo dhaxal-sugihiisa Suldaan bin C/casiis oo goob joog ka ahaa madashaas,dhoola cadayn iyo farxadna gacmaha la taagaya!
Waxa kale oo madasha shirka ka muuqday kooxda horbooda dawlad ku sheega ciidamada Itoobiya dalka ku casuuntay(waa sida Itoobiya hadalka u dhigtee).
Dhanka kale saxaafada Carabta gaar ahaan kuweeda Sucuudigu maal-galiyo ayaa shirkaas buunbuunisay, una sawiray guul taariikhi iyo dadaal nabadeed ka hirgalay dalka Soomaaliya. Oo haatan ka dib ku nagaan doona barwaaqo iyo nabad(waa sidey qoreene).
Maadama boqorkii Sucuudiga iyo u adeegihii labada xaram! arintaas u istaagay( eeg tirsiga 10521 ee wargayska Alsharq Al Awsat ee soo baxay 18/9/07).
Waxaa ka mid ahaa cinwaanadii qoraaladaas , Muqdisho oo damaashaad iyo riyaaq loogu dabaal-dagay(malaha xasuuqa maatada ayaa iyaga farax galiya) iyo Jamacaada Carabta oo heshiiskaas taageertay,kuna qanacsan dadaalka laysugu keenay ee lagu heshiisiiyay kooxaha Soomaalida ee is hayay( waxa madasha joogay waa kooxda Ambagaati oo kaliya!) iyo soomaaliya oo jidkii nabada cagta saartay!!
Nabad maxay ah? Hadaba inagoo ka wada dharagsan xaqiiqada dhabta ee dalkeenii hooyo ka jirta , iyo sida caasimadii qaranka Soomaaliyeed uga taliyo jabahad tigree ahi. Iyadoo darxumada iyo dhibaatada maatadii iyo qaxootiga dacalada Muqdisho dhaxanta,qoraxda ,gaajada iyo xanuunku isugu tagay la ildaranyiin.
Maxay tahay ujeedada riwaayadan cusub ee sucuudigu dhigayo?
Mida kale waxa marka horeba is waydiin leh, horta dalka Sucuudigu sidiisaba ma nasteex danta soomaalida ka taliyaa mise waa nacab hagardaamo badan oo gadob ka galay walina ka galaya dadka, danta iyo dalka soomaliyeed?
Akhristow horta intaynaan jawaabtaas bixin, waxa lama huraan inaynu hoosta ka xariiqno ugu horeynba, mawqifka iyo siyaasada guud ee boqortooyada Sucuudigu, waa mid ku sidkan ama ka shidaal qaadata aragtida , mawqifka iyo danaha mareykanka gobolka bariga dhexe iyo dunida muslimka
Mar kastana boqortooyadu waxay hogaamisaa ama maal- galisaa xulufada Mareykanka dalalka Carabta.Waana gacan yare iyo hawl fududeeye arintaas u dhega nugul.
Xiligii Jamaal C/naasir halgankii xornimadoonka Carabta hor-kacayay, Sucuudiga waxu hor-kacayay xuludafadii carabta ee Isku magacawday Xulafadii Baqdaad, ee uu ka midka ahaa C/kariim Qaasinkii Ciraaq,ee lugta jiidaysay dhalashada isbahaysi Carbeed oo tayo iyo karti leh.
Dagaalkii qaboobaa iyo xiligii hantiwadaagana, Sucuudigu waxa uu qaabilsanaa Mareekanka, la dagaaalanka fikirka hantiwadaaga ee dalalka Carabta.
Maantana waxa uu qabtaa is la shaqadii, waxaanu hogaamiyaa Dalalka la magac baxay qun-yar socodka Carbeed(Masar, Sucuudiga,Urdun) ee u ololeeya meel-marinta siyaasadaha Mareekanka ee bariga dhexe.
Hadaba hadaynu u soo noqo jawaabta su,aasheenii hore, marka horeba hadaynu iska garab marno,masaafurinta , xadhiga iyo darxumada uu kula kaco Sucuudigu qaxootiga xoogsatada soomaaliyeed.
Waxa haboon inaynu is waydiino maxay tahay danta iyo ujeedada Sucuudigu shirkan u qabtay xiligan?
Waxa la odhan kara shirkani waa mid uu Sucuudiga iyo cidii u xil-saaratayba ka leeyhiin laba u jeedo:
Khalkhal galinta guusha ka dhalatay shirka Asmara,oo si habsami u dhacay,natiijo samadoonka soomaaliyeed ku diirsadaana ka soo baxday. Hadaba si walaac iyo cabsi loogu abuuro dadwaynihii shirkan u hanqal taagayay, waxa laga garab qabtay, shirkan maqaar saarka ah, iyadoo la isticmaalayo ahmiyada diineed ee Sucuudiga, oo ah mar walba dabin lagu gabraaro laguna dhakro dalal iyo dadyow badan oo muslimiin ah.
Abaabulka iyo midaynta garabyada maamulka Embagaati, oo laba siyoodba u wiiqan, waa mida horee khilaafka iyo isjiid-jiidka dhexdooda ah , oo inta badan isku qabsadaan shilimaad dhiiga shabka ay xasuuqayaan ka tif-leeyahay.
Waa mida labaade dhirbaaxooyinka geesiyada iska caabinta iyo guumnaysi diidka, oo aad u naafeeyay iyaga iyo cadawga daba taaganba.
Sidaa awgeed maamadama Mareykanku dagaalkan dusha ka hagayo, waxa uu ka adeejiyay taliska Sucuudiga ee aadka ugu dhegaha nugul uguna tiirsan.
Hadaba waxa iswaydiin leh halkuu jiray Sucuudigu markii diyaaradaha iyo taangiyada lagu garaacayay, maatada Soomaaliyeed?
Aduunyada miyuu ka maqnaa? Iska dhaaf taageero kalee, maatida la baro kiciyay ee dhirta ku hoos dhimanaysa, kiish timir ahna ma ugu yaboohay?
Arintaas jawaabteedu waa mid looga fadhiyo Soomaalida wali riyoonaysa ee aaminsan gacalnimada ,muslinimada iyo walaatinimda taliska sucuudiga.
Hadaba si ay inoogu fududaato ka jawaabida waydiinta ah ma nacabaa mise waa nasteex Sucuudigu? Waxaynu magansanaynaa sooyaalka taariikhda.Waa marka waliba arinta maanta u kacay aynaan xisaabtaba ku darin
Ma ogtahay akhristow? Inay jirto dhagar taariikhi ah oo maamulka Sucuudigu ka galay qaranka soomaaliyeed , maalin soomaalidu meel xun taalay?
Sanadkii 1977 markii dagaalkii inaga cadawga Xabashidu dardarta ku socday, ee Soomaaliduna wali ku tirsanayd Gaashaan-buurta Hantiwadaaga, ee ay bari iyo galbeedba yaboohinayeen taageero dhaqaale iyo mid ciidanba oo ay dagaalka ku maareeyaan.
Ayaa Mareykanku u wakiishay wasiirka arimaha dibada Sudcuudiga Sucuud Al Faysal( wali xilkaas ayuu hayaa) inuu dawlada Soomaaliya ku qanciyo inay xadhiidhka u jarto midawga Soofiyeeti,isla markaasna ugu balan qaado taageero afka baarkiisa ah ,kuna damac galiyo garab istaag humaag ah.
Wax uu wadaba way u hirgashay dantaasi isaga iyo cidii soo diratayba. Balse markii sidaasi dhacaday Sucuudigu iyo Mareekankuba albaabada ayay Soomaalida ka xidheen.
Xili dalka iyo dadkuba baahi daran u qabay taageero ciidan iyo siyaasadeedba.
Sida la wada ogsoonyahayna Midawgii Soofiyeetina waxa uu la saftay taliska dalka Itoobiya. Soomaliya waxay isa soo taagtay meel banaan. Taariikhda dagaalkii qaboobaana , waa dagaalka kali ah ee Mareykanku iyo Ruushku isku mawqif ka noqdeen!!
Sucuudiga ayaanu ahaa dalkii ka shaqeeyay in Soomaaliya labada dhinacba seegto.Muxuu uga dan lahaa hagardaamadaas taariikhiga ah?
Ma ogtahay cidii barigaas Soomaaliya garab istaagtay?
Waa boqor Shaahii Iiraan,oo siyaasad iyo saanadba Soomaalida la dadaalay,waxaanu sida la sheego ugu deeqay ciidankeena hub dalka israa,iil samaysay, balse ciidamada Soomaalidu way diideen hubkaas inay adeegsadaan , halka laga keenay awgeed .
Isu ekaa ayaamuhu, maanta waxaynu is haynaa isla cadawgii , waliba waa inaga oo mar kale baanaan taagan, waliba qaarkeen cadawgu adeegsanayo, ayuu Sucuudigu oo mareekan mar kale ka adeejinayaa godob kale inaga galayaa.
Hada yaan la moodin, in hagardaamada Sucuudigu kula kaco dalallka Muslimiinta ahi, Soomaalida uun ku koobantahay.
Sanadkii 1996 waxa diyaarad hub si qarsoodi ah u xambaarsan lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada larnaka ee dalka Qubrus.Markii diyaaradii la baadhay waxa laga helay hub iyo saanad fara badan oo leh astaantii ciidamada sucuudiga( labadii seefood). Ma ogtahay shixnadaasi halkay u rarnayd ? waxa u rarnayd jabhadii SPLA ee hogaaminayay John Grang ee Kiristaanka ahayd, ee la dagaalamaysay dawlada Soodaan!!
Ma ogtahay mid ka mid saldhigyadii ugu muhiimsanaa ee mareykanku ka weeraray dalka Ciraaq , waxa uu ahaa saldhig ku yaala magaalada Carcar ee dalka sucuudiga!
Ma ogtahay in isla sanadkan gudihiisa ,Sucuudigu shir qabtay, la shaaciyay in lagu heshiisiinayo urarada Xamaas iyo Fatax , ujeedadiisa dhabtiina ahayd in lagu kala fogeeyo labadaas urur, laguna faquuqo ururka Xamaas( waana sida maanta taagan ee xamaas loo go,doomiyay). Shirkaas oo isla sida kan hada kooxda ambagaati laysu keenay oo mareykanku daaha gadaashiisa ka maamulayay!
Waliba ma ogtahay in Sucuudigu sida uu sheegtay markii ugu horaysay ,la
kulamyo madax ka socota dalka Yuhuuda, bilaha fooda inagu soo haya!
Akhristow laguma dhamayn karayo maqaal, buugaagna lagaga bogan kari maayo, dhibaatooyinka iyo jiliaafooyinka Sucuudigu u gaysto dalalka Muslinka ah.
Waxa kaliya oo muhiim, in lagu baraarugo indho soo jeedana lagu fiiriyo taliskaas midabada badan.
Lagana digtoonaado dabinadiisa uu uu ka qariyo lacagta shidaalka iyo hagoogta diinta ee aan daacada ahayn .
Waxa kale ugu danbayntii wax lagu farxo ah in Sucuudigu u dhuranayo muuqaalkiisa runta, maalin kastana , maryihii uu uu isku qarin jiray qaar ka dhacayaan ,ceebihiisuna isa soo tarayaan .
Shacabka iyo halgamayaasha Soomaalyeedba,ha ogaadaan inaan khiyaamooyinka Sucuudiga,cududa Mareekanka iyo ciidamada Itoobiyaba, guusha ka hor istaagi karin.
Haday naf-hurid ,wacyi,iyo isku duubni cadawga ugu jilib-dhigaan.Ugu danbeyna waxaan leeyahay xornimadoonka Soomaaliyeed,ku dhaqma dardaarankii Xaaji Aadan Af-qalooc, ee ahayd� ololha ha daynina,xornimo aamus lagu waaye�.
Su’aalihii Baarlamaanku weydiiyey wasiirka Wasaaradda dalxiiska iyo duurjoogta Cali Xareed
Waxaa ka mid ahaa: “Waxaan maqalney in dowladii TNG-da ay dowlada Liibiya la gashay heshiis ay deyn uga qaadatay lacag dhan $7.5Milyan..”... Akhri Jawaabaha